नयाँ असीमित पावर योजनाको सदस्यता लिनका लागि को योग्य छ?
17th फेब्रुअरी 2017 पछि प्रभावकारी भएका सम्पूर्ण नयाँ U Mobile प्रिपेड ग्राहकहरूलाई नयाँ योजनामा स्वचालित रूपमा सक्रिय गरिनेछ। विद्यमान योजना (पावर प्रिपेड, नयाँ U प्रिपेड वा U प्रिपेड योजना) मा भएका र नयाँ असीमित पावर योजनामा स्तरवृद्धि गर्न चाहने ग्राहकहरूका लागि, तपाईंले UMB वा SMS मार्फत त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ।
असीमित पावर प्याक केसँग आउँछ?
असीमित पावर प्रिपेड प्याक निम्नलिखितसँग प्रिलोड हुन्छ:
नि:शुल्क 200MB उच्च गतिको इन्टरनेट
नि:शुल्क आधारभूत इन्टरनेट
10 दिनको मान्यता
100 मिनेट नि:शुल्क कल* (प्रति दिन 10 मिनेट)
मैले नि:शुल्क 200MB उच्च-गतिको इन्टरनेटको आनन्द कसरी लिने?
निःशुल्क 200MB उच्च गतिको इन्टरनेट तपाईंको असीमित पावर प्रिपेड सुरुवाती प्याक सक्रिय हुँदा स्वचालित रूपमा दिइनेछ। यो 10 दिनको लागि मान्य हुन्छ।
मैले 100 मिनेट नि:शुल्क कलहरूको आनन्द कसरी लिने?
असीमित पावर प्रिपेड प्याकको सक्रियकरण हुँदा, तपाईंले स्वचालित रूपमा 10 दिनसम्म प्रत्येक दिन 10 मिनेट निःशुल्क U Mobile – U Mobile कलहरूको आनन्द लिनुहुनेछ।
असीमित पावर योजनाको लागि स्थानीय कल र SMS दरहरू के छन्?
दुबै कलहरू र SMS लाई 12 sen शुल्क लगाइन्छ। कलहरूका लागि चार्जिङ ब्लक 30 sec/ब्लक हो।
म कसरी सक्रिय रहने?
सक्रिय रहनका लागि समान्य रूपमा आफ्नो खातालाई टप अप गर्नुहोस्। प्रत्येक RM1 टप अप 1 दिनको सक्रिय अवधि बराबर हुन्छ। कुनै एउटा समयमा अधिकतम सक्रिय अवधि 365 दिन हो।
असीमित पावर योजनाको मान्यता अवधि के हो?
असीमित पावर प्रिपेड योजनाको 10 दिन सक्रिय अवधि र 60 दिन निष्क्रिय अवधिसँग आउँछ।
निःशुल्क कलहरू प्रोमोसन भिडियो कलहरूमा लागू हुन्छ?
हुँदैन, निःशुल्क कलहरू U Mobile नेटवर्कभित्र स्थानीय भ्वाइस कलहरूका लागि मात्र लागू हुन्छ।
निःशुल्क कलहरू प्रयोग गरिदाँ के हुन्छ?
मानक कल दरहरू लागू हुनेछ।
मैले आफूले निःशुल्क कलको आनन्द लिने दिनहरूको संख्या कसरी गणना गर्ने?
प्रत्येक RM1 टप-अपले तपाईंलाई 1 दिन निःशुल्क कलहरू दिन्छ। तपाईंले RM10 टप अप गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफूले टप-अप गरेको दिनबाट 10 दिन निःशुल्क कलहरू प्राप्त गर्नुहुनेछछ। 365 दिनमा नि:शुल्क कलको अधिकतम संख्या निश्चित गरिन्छ।